Programming စကားလုံးများသို့မဟုတ်စကားစုကြီးများ Martech Zone
သောကြာနေ့, ဇန်နဝါရီလ 26, 2007 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
ထူးကဲသောပရိုဂရမ်မာများနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကုန်ပစ္စည်းမန်နေဂျာများ (သို့) သူတို့၏ဖောက်သည်များထံမှထွက်ခွာရန်ကြောက်လန့်စေရန်ဗိသုကာများ၊ ခေါင်းဆောင်များနှင့်တီထွင်သူများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းများတွင်ကြီးမားသောစကားလုံးများသို့မဟုတ်စကားစုများကိုထုတ်လွှင့်လိုသည်။
၎င်းသည်ပရိုဂရမ်မာများကြိုက်နှစ်သက်သည့်အရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီနေရာမှာသူတို့ထဲကတစ်ဆယ်ကိုအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖော်ပြချက်ပါရှိသည် (ငါသူတို့၏ဝေါဟာရများကိုငါ hack နှင့်အတူ hack သကဲ့သို့ငါနေရာတိုင်း developer များအမျက်ဒေါသဆွဲဆောင်လိမ့်မယ် ငါ့ရိုးရှင်းတဲ့ကားဥပစာစကား):
abstraction - ၎င်းသည်ခက်ခဲသောလုပ်ငန်းစဉ် (သို့) လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကိုယူပြီးအခြေခံအားဖြင့်ယုတ္တိနည်းအားဖြင့်၎င်းကိုအဆင့်ဆင့် (A၊ B မှပိုင်ဆိုင်သည်၊ ခသည် C နှင့်ဆိုင်သည်) သို့မဟုတ်အင်္ဂါရပ် (သို့) လုပ်ဆောင်ချက် (အရောင်၊ အရွယ်အစား၊ အလေးချိန်စသည်ဖြင့်) ကိုချိုးဖောက်နေသည်။ Abstraction သည် object-oriented programming ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ကျွန်ုပ်၏ကားကိုတည်ဆောက်ရန်ကျွန်ုပ်သည်ဘောင်တစ်ခု၊ အင်ဂျင်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုသီးခြားစီတည်ဆောက်သည်။
ကန့်ကွက်သည် - ဆိုလိုသည်မှာစနစ်အတွင်းရှိကုဒ်အဟောင်းအချို့ကျန်နေနိုင်သော်လည်းဖယ်ရှားရန်လိုအပ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ကုဒ်နံပါတ်ကိုပယ်ဖျက်လိုက်သောအခါပရိုဂရမ်မာများအနေနှင့်ရည်ညွှန်းချက်အဟောင်းများသို့မရောက်မှီတိုင်အောင်ပရိုဂရမ်မာများကကုဒ်နံပါတ်ကိုကိုးကားခြင်းသို့မဟုတ်အသစ်သောကုဒ်နံပါတ်ကိုအသုံးမပြုခြင်း၊ ၎င်းကိုဖယ်ရှားသင့်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းသည်ပျောက်ကွယ်နေသောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါက၎င်းသည်ပျောက်ကွယ်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းသင်၏အသုံးပြုသူများအားသတိပေးခြင်းဖြင့်၎င်းကိုခဏတစ်ဖြုတ်သိမ်းထားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်မှာ ၀ ိုင်ယာကြိုးအသစ်နှင့်စတီရီယိုစနစ်အသစ်တစ်ခုရပေမယ့်ဝါယာကြိုးအဟောင်းကိုစွန့်ပြီး၎င်းကိုမသုံးပါ။
encapsulation တွေကိုသေချာ - ၎င်းသည်စနစ်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို ဖြတ်၍ မရောက်ရှိသည့်အခါဤအရာသည်မိဘအတွင်း၌သင်၏ပရိုဂရမ်ပရိုဂရမ်များကိုစုစည်းသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်သန်းချီသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများရှိပါက၎င်းတို့ကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရရှိနိုင်မည့်အစားသူတို့လည်ပတ်နေသောနယ်မြေများအတွင်း၎င်းတို့ကိုထိထိရောက်ရောက်စနစ်တကျနှင့်လည်ပတ်စေလိုသည်။ အင်ဂျင်ရဲ့အင်ဂျင်ကိုတပ်ဆင်ထားတဲ့အင်ဂျင်ကိုငါထည့်လိုက်တယ်။ ဆီစစ်စစ်ကိုနောက်ထိုင်ခုံထဲမထည့်ဘူး။
အမွေကို - ၎င်းသည်အခြားဘုံကုဒ် (class) ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုပြန်လည်ရယူရန်မလိုဘဲလုပ်ဆောင်နိုင်မှုအသစ်အတွက်ပြန်လည်အသုံးပြုရန်စွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ အမွေဥစ္စာသည်အခြားကောင်းသောအရာဝတ္ထုကို ဦး တည်သည့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ကားထိုင်ခုံတွင်ထိုင်သူမည်သူမဆိုကလေးသို့မဟုတ်လူကြီးကိုသယ်ဆောင်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ပုံမှန် - ဤသည်မှာဒေတာဘေ့စ်တွင်အချက်အလက်များကိုပိုမိုထိရောက်စွာစုစည်းခြင်းကိုကိုးကားခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ တစ်နေ့လုံးမီးအိမ်များကိုအနီရောင်၊ အဝါရောင်နှင့်အစိမ်းရောင်မှတ်တမ်းတင်ရပါကဥပမာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ စံချိန်တင်တစ်ခုစီကိုအနီရောင်၊ အဝါရောင်နှင့်အစိမ်းရောင်တို့ဖြင့်ရေးမည့်အစား - ၁၊ ၂ နှင့် ၃ ကိုရေးပြီးနောက်ဇယားတစ်ခုကို ၁ = အနီရောင်၊ ၂ = အဝါရောင်နှင့် ၃ = အစိမ်းရောင်ဖြင့်ရေးပါ။ ဤနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်တစ်ချိန်ကအနီရောင်၊ အဝါရောင်နှင့်အစိမ်းရောင်များကိုသာမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ကားတံခါးတစ်ခုစီတွင်တံခါးလက်ကိုင်တစ်ခုစီရှိသည်။ လက်ကိုင် (၄) ခုထက်ကွဲပြားသောနေရာ ၄ ခုတွင်အသုံးပြုသည်။
အရာဝတ္ထု Oriented - ခေတ်သစ်ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားများတွင်၎င်းသည်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကုဒ်များကိုအပိုင်းပိုင်း၊ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအားဖြင့်ရေးသား။ ပြန်လည်အသုံးချနိုင်သောဒီဇိုင်းနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ မှန်ကန်စွာတည်ဆောက်ထားသောအီးမေးလ်လိပ်စာကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေလိုပါကဥပမာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါ function ကိုတစ်ချိန်ကတည်ဆောက်နိုင်ပြီး၊ ငါ့လျှောက်လွှာထဲမှာဘယ်နေရာမဆိုသုံးရမယ်။ ကျွန်ုပ်၏ကားတွင် ၁၈ လက်မအနားကွပ်ရှိပြီးအခြားကားများ၌အတူတူပင်သို့မဟုတ်အခြားထုတ်လုပ်သူများကအသုံးပြုနိုင်သည်။
ပိုလီမာ - ဒီဟာကရှင်းပြဖို့ခက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အခြေခံအားဖြင့်တော့သူကတခြားအခြေအနေတွေမှာဒိုင်းနမစ်သုံးနိုင်တဲ့ကုဒ်တွေထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းပါ။ တနည်းအားဖြင့်၎င်းသည်ရည်ညွှန်းထားသည့်နည်းအားဖြင့်၎င်းသည်ထူးခြား။ တက်ကြွသောလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအမွေခံရနိုင်သည်။ ဤသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အလွန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းအားသွင်းရန် (သို့) ကျွန်ုပ်၏တာယာစုပ်စက်သို့ဖျော်ရည်ပေးရန်ကျွန်ုပ်၏မော်တော်ကား၏လျှပ်စစ်ထွက်ပေါက်ကိုသုံးနိုင်သည်။
နေ့တိုင်းပြန်လည်စတင်မည် - ဤနည်းလမ်းသည်ကုဒ်နံပါတ်ကိုကိုးကားသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ တခါတရံတွင်၎င်းသည်ထိရောက်ပြီးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်ဆောင်သော်လည်းအခြားအချိန်များကသင်၏ application များကိုထိန်းချုပ်။ မရနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ကားစတီရီယိုပေါ်တွင်ရှာကိုနှိပ်ပါ။ ၎င်းသည်ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများမှဖြတ်သန်းသွားသည်။ ဒါဟာပြီးသွားဘယ်တော့မှမယ့်သွားစောင့်ရှောက်။
ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း - ၎င်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူစွာလိုက်နာရန်သို့မဟုတ်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာစုစည်းရန်လွယ်ကူစေရန်အတွက်ကုဒ်များကိုပြန်လည်ရေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ထပ်မံလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိပါ။ ငါ့အင်ဂျင်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်
ဆာဗာ Oriented ဗိသုကာ (SOA) - အရာဝတ္ထုကိုအခြေခံသည့်ပရိုဂရမ်းမင်းကိုယူပြီး၎င်းကိုအချို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်သောစနစ်တစ်ခုလုံးရှိနိုင်သည့်ကြီးမားသောစနစ်များကိုအသုံးပြုပါ။ သင့်တွင်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကိုပြောဆိုသောအီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးစနစ်နှင့်စကားပြောသောဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ ပစ္စည်းများကိုတစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့သယ်ယူရန်ကျွန်ုပ်၏ကားနှင့်အတူနောက်တွဲယာဉ်တစ်စီးဆွဲသည်။ ငါသူတို့ကိုချိတ်ဆက်ရန် trailor hitch (XML) ကိုသုံးသည်။
ကျွန်ုပ်၏ဥပစာစကားများသည်အမြဲတမ်းအပြည့်အ ၀ ပစ်မှတ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းနားလည်ပါသည်။ ငါသူတို့နည်းနည်းကူညီပေးခဲ့တယ်မျှော်လင့်ပါတယ်
developer တစ်ယောက်နှင့်သင်၏နောက်အစည်းအဝေးတွင်ဤစကားလုံးများကိုသင်ကြားရသည့်အခါအကြံဥာဏ်အချို့ရှိသည်။ သင့်ထိုင်ခုံသို့ ပြန်၍ မကြည့်ပါနှင့် ဝီကီပီးဒီးယားသူတို့စောင့်ကြည့်နေမှာပါ သူတို့ကတိုက်ခိုက်လိမ့်မယ် flinch မထားပါနဲ့ ဒီမှာဘာလုပ်ရမလဲ…နက်နက်နဲနဲတွေးနေသလိုမျိုးပြတင်းပေါက်ကနေစဉ်းစားပြီးမေးချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြန်လှည့်ကြည့်ပါ။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူသူတို့၏ကြေငြာချက်အတိုင်းလိုက်နာရန်သူတို့စောင့်ပါ။
ပူဖောင်းများ, ရောင်ပြန်ဟပ်မှု - ယခု Ambient Glow!
ဇန်နဝါရီ 27, 2007 မှာ 1: 05 AM
LOL သင်အမှန်တကယ်သံရိုက်နိုင်ခဲ့သည် Doug you ငါတို့ကိုစီးပွားရေးမှထုတ်ပယ်ရန်ကြိုးစားနေသလား။ ခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲကျနော်တို့နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရတဲ့အတွက်ဒီဖောက်သည်တွေကိုဖောက်သည်တွေနဲ့ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်တယ်။ ယခုငါတို့သူတို့ကိုတစ်လမ်းဖြင့်မှုတ်ရန်နည်းလမ်းထွက်တွက်ဆရပါမည် ပေါင်းစပ်ပြီး ဤကဲ့သို့သောသွားနိုင်သည့်phraseရာမစကားစုတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ထိုစကားလုံးများ -
သင်ထည့်သွင်းရန်ကြိုးစားနေသည့်အင်္ဂါရပ်သည်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုခြုံငုံမိစေပြီး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့် architecutre မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည့်အရာများစွာကိုабстрактနိုင်သည်။
ဇန်နဝါရီ 27, 2007 မှာ 9: 57 AM
ဇန်နဝါရီ 27, 2007 မှာ 10: 07 AM
ဇန်နဝါရီ 27, 2007 မှာ 11: 00 AM
27:2007 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 2, 58
ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ဒီ post ကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ထိုမကောင်းသောအရာမဟုတ်ပါ - such ကျွန်ုပ်သည်လူများကိုထိုကဲ့သို့သောနည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ပတ်သတ်၍ မည်သူမျှဝါးမျိုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
ငါ့ကိုနင့်အတွက်စကားလုံးအချို့ကိုစမ်းကြည့်စမ်းပါ ဦး ။
27:2007 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 3, 24
အားလုံးပျော်စရာ၌, ဒင်း! အားဖြင့်ရပ်တန့်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 🙂